Imtixaan Sanadeedka Gobaladda Waqooyi 2019/20 oo maanta ay u…
In ku dhaw 11,000 oo Arday oo sanadkaan ka gudbaysa Fasalada 12-aad ee Dugsiga Sare ayaa maanta u fadhisay Imtixaanka Shahaadiga ee sanadkiiba mar ay ka qaado Wasaaradda Waxbarashada Gobaladda Waqooyi.
Imtixaanka waxaa daah furay Wasiirka Waxbarashada iyo Sayniska Gobaladda Waqooyi Axmed Maxamed Diiriye, waxaana wehliyay xubno katirsan Wasaaradda, Macalimiinta iyo maamulada Iskuulada lagu qaadayo.
Wasiir Axmed Maxamed Diiriye waxa uu la hadlay Arday kahor inta aan loo qaybin warqadaha Imtixaanka lasoo diyaariyay, isaga oo kala hadlay ilaalinta shuruucda iyo xaaladda looga feejignaanayo faafitaanka Cudurka dilaaga ah ee COVID-19.
Daah furka Imtixaanka oo lagu qabtay Dugisga sare ee Muuse Yuusuf ee Magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxa uu ka shaaciyay in sida loo qorsheeyay uu u socon doono gelista Imtixaanka.
Shuruudaha lagu galayo waxa uu Ardayda uu la hadlay u sheegay in guud ahaan Gobollada Gobaladda Waqooyi ay ka siman yihiin oo aysan jirin Magaalo ama gobol gaar looga dhigay sida uu hadalka u dhigay.
Ardayda ayaa la kala fogaayay, waxaana la dhimay fasalada tirada ay ku gali jireen, Arday waliba waxaa la siiyay Agabka Afka iyo sanka daboola (Face Mask), Gacan gashi iyo agab kale oo looga hartagayo faafitaanka Fayruska Corona.
Guddiga la dagaalanka Covid-19 ee Gobaladda Waqooyi ayaa todobaadkii tagay ku dhawaaqay in la qaaday xaalad iyo Xayiraad waliba oo ka dhalatay cudurka Coronavirus, inkasta oo aan guud ahaan deegannada maamulkaas kasoo afjarmin Cudurka.